Muuri News Network » Layaabka Miyey Noqon Karin: Waddan ayaa 2 Xabad keliya laga riday 2014
Layaabka Miyey Noqon Karin: Waddan ayaa 2 Xabad keliya laga riday 2014
Booliska wadanka reer Europe ee Norway ayaa laba xabadood kaliya riday sanadkii tagay. Daraasad cusub oo soo baxday ayaa sheegtay in labada xabadoo ay dishay hal qof oo kaliya aaneyna ku dhawacmin cidna.
Saraakiisha wadankas ayaa qoriga ku tagaay dad wax fal geeystay 42-joor oo kaliya sanadkii tagay. Tasoo ah numberkii ugu yaraa ee wadankas laga heley mudo dhan 12 sano. Isla markasna laba qof oo kaliya ayey booliska dileen kadib markey xabad is weydaarsadeen isla mudadas, 12.
Badanka booliska Norway ayaan ku hubeysneyn qori sida Britain, Ireland iyo Iceland, ayagoo bilaa qori roondo ku socda. Waxey hubka u qaatan oo kaliya markey xaalada aminiga khalkhaliya soo wajahan.
Daraasadan ayaa sidoo kale soo bandhigtay in Mareykanka booliskisa, ayagoo sheegay in 547 qof ay dileen booliska wadankas lixdi bilood oo lasoo dhafay kaliya ee sanadkan 2015. Halkasoo 503 ka mida xabad ku dileen.
UK ayaa ayaguna la mida Norway ayagoo booliskooda dilay 1 qof sanadkii 2015.
24-dii maalmood oo ugu horeysay sanadkan 2015, booliska Mareykanka ayaa dilay 59 ruux, tasoo ka badan dadka ay dileen booliska England iyo Wales markii leysku dara 24-ta sanadood oo lasoo dhafay tasoo dhan 55 ruux oo kaliya.
Shacabka Mareykanka ayaa qatar ugu jira in 100% uu dilo sarkaal booliska ka tirsan markii loo eego shacabka Britishka.
Shacabka Mareykanka oo kaliya ma ahan kuwo dhibaatooyinka soo wajahan oo Booliska ayaa ayana dil iyo dhaawac kasoo garaa shacabka. Booliska ayaa maalin kasta wajaha rabsho, sanadkii 2013 waxa si xun loo dilay 30 saraakiil ayagoo shaqadooda amini sugida gudanaya.
Markii ugu dambeysay oo sarkaal British ah xabad lagu dilo ayaa aheyd sanadkii 2012.